ဘားအံရေးဘေးကြောင့် အမျိုးသမီးလယ်သူမတွေ နလန်ထူနိုင်ပါ့မလား – HI Burma
Home	ဓါတ်ပုံများ	ဘားအံရေးဘေးကြောင့် အမျိုးသမီးလယ်သူမတွေ နလန်ထူနိုင်ပါ့မလား
ဘားအံရေးဘေးကြောင့် အမျိုးသမီးလယ်သူမတွေ နလန်ထူနိုင်ပါ့မလား
ေရနည္းနည္းျပန္က်သြားၿပီဆုိေပမယ့္ ဘားအံၿမိဳ႕ေပၚနဲ႔ ၿမိဳ႕နဲ႔အနီးတ၀ိုက္ ေက်းရြာေတြမွာ ေရေတြ က်န္ေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။
ေရျမဳပ္ေနတဲ့ တုိင္ေတြကေတာ့ စုိက္ခင္းကာထားတဲ့ ၿခံစည္းရိုးတုိင္မ်ား
အသီးခူးခါနီးအခင္းမ်ားနဲ႕ စိုက္ၿပီးခါစ အခင္းမ်ားပါ အကုန္လံုး ေရျမဳပ္ခဲ့ရပါတယ္။
အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေနနဲ႕ အိမ္မႈကိစၥမ်ား၊ အိမ္ေမြး တိရိစၦာန္မ်ား ျပဳစုမႈအျပင္ မိသားစု၀င္ေငြအတြက္ပါ အလုပ္လုပ္ေနၾကရပါတယ္။
ေရႀကီးမႈေၾကာင့္ အိမ္ေမြးတိရိစၦာန္ေတြ အနာက်ၿပီး ေရာင္းခ်လို႕ မရပါဘူး။
ေရျမဳပ္ေနတဲ့အတြက္ ေက်ာင္းတက္ေနတဲ့ ကေလးေတြအတြက္ စားေသာက္ဖို႕ အခက္ခဲျဖစ္ေနပါတယ္။
လက္ရွိမွာ ေရျမဳပ္ေနတဲ့ လယ္ယာေျမ၊ စားက်က္ေျမမွာ ေပါက္ေနတဲ့ ေအာင္သေျပေတြခူးေရာင္းျပီး ဟင္းစားအတြက္ရွာေနရပါတယ္။
ရေနည်းနည်းပြန်ကျသွားပြီဆိုပေမယ့် ဘားအံမြို့ပေါ်နဲ့ မြို့နဲ့အနီးတဝိုက် ကျေးရွာတွေမှာ ရေတွေ ကျန်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။
နွားစားကျက်မြေနဲ့ လယ်ယာသီးနှံစိုက်ပျိုးမြေအကုန်လုံး နှစ်မြုပ်သွားတဲ့အတွက် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနဲ့ သီးနှံစိုက်ပျိုးရေးကို အခြေခံပြီး အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုသူ တောင်သူလယ်သမားတွေအတွက်ရော ရေလွှမ်းမိုးမှုဒဏ်ကို အပြင်းအထန် ကြုံကြရပါတယ်။
ဝင်ငွေအတွက်အပြင် မိသားစုရဲ့ တာဝန်နဲ့၊ အိမ်တွင်းမီးဖိုချောင်အတွက်ပါ တာဝန်ယူနေကြရတဲ့ လယ်သူမတွေကတော့ ရေကြီးမှုဒဏ်ကို တိုက်ရိုက်အထိခိုက်ဆုံးလို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေနဲ့ လယ်သမားတွေဟာ သီးနှံထွက်ချိန်ကို အားခဲစောင့်နေကြပေမယ့် ခူးချိန်ရောက်ခါနီးမှ အားလုံး ရေလွှမ်းမိုးခံခဲ့ရပါတယ်။ လယ်သူမအများစုမှာ စိုက်ခင်းအရင်းအတွက် ပြန်လည်အကြွေးဆပ်ရန် သီးနှံထွက်ချိန်ကို စောင့်ဆိုင်းနေသူများဖြစ်ပါတယ်။
အသီးခူးခါနီးအခင်းတွေမြုပ်သလို စိုက်ပြီးခါစ အခင်းတွေလည်း အကုန်လုံး ရေမြုပ်ခဲ့ရလို့ ရေပြန်ကျသွားရင် ဘဝကို အသစ်က ပြန်စရမည့် အမျိုးသမီးလယ်သူမ အများအပြားရှိနေပါတယ်။
လယ်ထွန်တာကလွဲပြီး အမျိုးသမီးတွေက အကုန်လုံး လုပ်နေကြရသလို တဖက်မှာလည်း စားဝတ်နေရေးအတွက် ချက်ပြုတ်လျှော်ဖွတ်ရတဲ့အပြင် အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေကိုပြုစုမှုကိုလည်း တပြိုင်တည်း လုပ်ဆောင်နေရတယ်လို့ တောကုန်းကြီးရွာက ရွာခံအမျိုးသမီးတစ်ဦးကပြောပါတယ်။
အသီးခူးစရာမရှိလို့ တစ်နေ့စာ ဟင်းစားအတွက် ဝင်ငွေရဖို့နဲ့ နောက်ထပ် စိုက်ပျိုးရေး အရင်းငွေရဖို့အတွက် ရှိထားတဲ့ ကြက် ဝက် ဘဲတို့လို အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေကို ရောင်းချဖို့ကလည်း အဆင်မပြေပြန်ပါဘူး။ ရေကြီးမှုကြောင်း အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေ အနာကျနေပြီး ဝယ်မယ့်သူ မရှိဖြစ်နေပါတယ်။
ဝင်ငွေလည်းမရှိ၊ ခင်ပွန်းသည်တွေက ငါးဖမ်းရှာပေမယ့်လည်း ရေကြီးနေတာကြောင့် ငါးလည်း မရတဲ့အတွက် ကျောင်းတက်နေတဲ့ကလေးတွေအတွက် နေ့တဓူ၀ စားဖို့သောက်ဖို့အတွက်ပင် အခက်အခဲဖြစ်နေပါတယ်။
အခုချိန်မှာတော့ အချို့လယ်သူမတွေဟာ ခင်ပွန်းသည်နဲ့အတူ ရေလွှမ်းမိုးခံထားရတဲ့ လယ်ယာမြေ၊ စားကျက်မြေမှာ ပေါက်နေတဲ့ အောင်သပြေပန်းတွေကို ရှာကြံခူးပြီး ရက်ကြီးခါကြီး ဘာသာရေးနေ့တွေမှာ ရောင်းပြီး ဟင်းစားအတွက်၊ ကလေးကျောင်းမုန့်ဖိုးအတွက် ရှာဖွေနေကြပြီး ရေကျချိန်ကို စောင့်နေရုံမှအပ တခြားလမ်းမရှိကြပါဘူး။
စစ်ဒဏ်သင့် နယ်မြေတွင် ပထမဆုံးအကြိမ် ပြုလုပ်သော ငြိမ်းချမ်းရေး ပန်းချီ/ ကဗျာပြိုင်ပွဲ
မကွေး(ဖန်းခါးမြေ)မှ ငြိမ်းချမ်းရေးနေ့ လှုပ်ရှားနေ့ မြင်ကွင်းများ
မုန်းဒေသက အခြေခံအမျိုးသမီးတွေနဲ့ ကွမ်းသီးခြစ်လုပ်ငန်း
မမီးမီး (၈၈) ရဲ့ ဈာပနအခမ်းအနား မြင်ကွင်း (၁၇. ၈ ....
အားတင်းပြီးနေရတဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံက မြန်မာအိမ်အကူများ
ပုံစံခွက်ထဲက ရုန်းထွက်ဖို့လိုနေတဲ့ ပညာရေး
စက်တင်ဘာ ၂၁ ရက်နေ့ ငြိမ်ချမ်းရေးလမ်းလျှောက်ချီတက်ပွဲ (ရန်ကုန်မြို့)
မမီးမီး (၈၈) ရဲ့ ဈာပနအခမ်းအနား မြင်ကွင်း (၁၇. ၈...